चिकित्सक केसीका मागबारे सरकार ‘रहस्यमय ढंगले’ मौन, कुरा सुन्नै चाहन्नन् कोइराला जनबोली न्यूज नेटवर्क प्रा. लि
चिकित्सक केसीका मागबारे सरकार ‘रहस्यमय ढंगले’ मौन, कुरा सुन्नै चाहन्नन् कोइराला
मङ्गलबार १० चैत, २०७१
काठमाडौं । पाँचौंपटक अनशन बसेका वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसीका मागबारे सरकार ‘रहस्यमय ढंगले’ मौन छ । दस दिनअघि नै अल्टिमेट दिएर अनशन सुरु गरेको दोस्रो दिन सोमबारसम्म सरकारले डा. केसीका मागबारे सामान्य चासोसमेत देखाएको छैन ।
यसअघि डा. केसीले कात्तिक २० गते दसदिने अल्टिमेटम दिँदा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला पाँच दिन नबित्दै माग पूरा गर्न कस्सिएका थिए ।
त्यसअघि चौथो अनशन क्रममा पनि उनले आफ्नो शपथ ग्रहणलगत्तै चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) का डिन नियुक्तिको निर्देशन र माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए ।
यसपटक भने प्रधानमन्त्री कोइराला ‘कुरै सुन्न तयार नभएको’ आइओएमका एक वरिष्ठ चिकित्सकले बताएका छन्। ‘उहाँ सम्बन्धनका पक्षमा पूरै एकोहोरिनुभएको छ’, आइओएमका ती चिकित्सकले भने, ‘हामीले विभिन्न स्रोतबाट उहाँलाई सम्झाउन खोज्दा कुरै सुन्न तयार हुनुहुन्न।’
मन्त्रिपरिषद स्रोतले पनि कोइराला डा. केसीको मागलाई लिएर छलफल गर्न अनिच्छुक रहेको बतायो । ‘हामीले सम्झाउन खोज्दा उहाँ मलाई सिकाउनुपर्दैन भन्नुहुन्छ’, मन्त्रिपरिषद स्रोतले प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै भन्यो, ‘तपाईंहरू मलाई मात्र किन सम्झाउनुहुन्छ, बरु केपी ओलीजीलाई पनि सम्झाउनुस् न, उहाँ मान्नुहुन्छ’
आइओएम स्रोतहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री कोइराला आफूनिकटका सीमित चिकित्सक, केही पारिवारिक सदस्य र सम्बन्धनको पर्खाइमा रहेका मेडिकल कलेजका प्रतिनिधिका मात्र कुरा सुनिरहेका छन्। आजको नागरिकमा समाचार छ ।
विज्ञले निकालेको तथ्य अब कोरोनाबाट बच्न खोपभन्दा मास्क नै बढी प्रभावकारी